Ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka dia manara-maso akaiky ny fivoaran’ny valanaretina Covid-19, tsikaritra araka izany fa misy fiakaran’ny tahan’ny olona mitondra ny tsimokaretina.
Ny hany fitaovana ahafahantsika misoroka ny firongatr’ity valanaretina ity dia ny fanarahana hatrany ireo fepetra sakana. Misy ihany koa anefa ny fihinana CVO sy CVO+ izay mampitombo ny hery fiarovana.
Nanao fanentanana misimisy kokoa mahakasika izany Ramatoa Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, Dr RASAMOELINA Fanjambololoniaina Dominique , androany Zoma 29 janoary 2021
Ces derniers temps, on a pu constater une légère hausse de personnes infectées par la Covid-19 à Madagascar. Le Ministère de la Santé Publique, suit de près l’évolution de cette pandémie, et met à disposition tous les moyens nécessaires pour gérer cette propagation.
Madame le Secrétaire Général du Ministère, Dr RASAMOELINA Fanjambololoniaina Dominique a tenu à rappeler que pour freiner la diffusion du virus, la mesure la plus efficace et la plus simple est d’appliquer les gestes barrières. Cependant, elle encourage également la prise du CVO et du CVO+ afin d’augmenter l’immunité
Nivoaka tamin'ny : 29/01/2021
Mikiry hatrany. Tsy ampy ny fifaninanana lomano amin’ny dobo filomanosana 25 metatra. Ahazoana ny zava-bitan’ireo mpilomano amin’izany indrindra no nahatonga ny Club Managing Sport Natation nikarakara ny fifaninanana “la persévérance” izay tohanan’ny Mvola. Ny 13 desambra 2020 tao amin’ny dobo filomanosana Esca Antanimena ny lalao famarananana. Telo mianadahy ao amin’ny klioban’ny “Club Managing” no nahazo ny “meilleurs performance”. Ho an’ny sokajy junior vehivavy, nahavita ny 50 metatra papillon tamin’ny 29,9 segondra raha 30,08 segondra izany teo aloha i Rabejaonina Antsa. Ho an’ny sokajy Benjamin lehilahy kosa dia vitan’i Andriamampionona Baritiana Mathieu tamin’ny 4 minitra 43,73 segondra ny 400 metatra “nage libre” raha toa ka 4 Minitra 57,62 segondra izany teo aloha . Ho an’ny sokajy Benjamin vehivavy dia 36,62 segondra raha 37,53 segondra izany teo aloha no nahavitan-dRazakatiana Finaritra ny 50 metatra “brasse”. Efa nandrasan’i Finaritra ela io zava-bitany io satria efa niomna ela izy. “Roa herinandro talohan’ny fifaninana aho no nanao fanomanan-tana. In-droa isan’andro, ny atoandro sy ny hariva”, hoy izy. Araka ny fanazavan’ny filohan’ny klioba, Yvannie Rabenitany fa natao ihany koa ity fifaninanana ity ho fanamarihana ny fankalazana ny faha-15 taonan’ny klioba. “Persévérance no natao anaran’ny fifaninanana satria mbola mila mikiry hampiakatra sy hanatsara hatrany ny zava-bita. Isaorana manokana ny Mvola nanohana ny hetsika”, hoy izy. Raha ny fanazavan’i Maître Doda, isan’ireo nanorina ny klioba fa 83 isan’ny ankizy mpikambana amin’izao fotoana izao. Nanomboka ny taona 2008 nankaty dia nandray nandray anjara tamin’ny « championnat du monde », « jeux olympiques » ny club managing ary efa nahazo ny « titre nationaux », ny « records nationaux » ary ny « meilleurs performances ». Nirina R. Cet article CLUB MANAGING SPORT NATATION: Montsan’ i Antsa, Finaritra ary Baritiana ny zava-bita teo aloha est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article CLUB MANAGING SPORT NATATION: Montsan’ i Antsa, Finaritra ary Baritiana ny zava-bita teo aloha a été récupéré chez Délire Madagascar.
Mody matory ireo jiolahy. Izany indray ny fomba fiadin’ireo jiolahy rehefa tsy te ho tratran’ny polisy izy ireo. Voasambotry ny polisy teny amin’ny Vatobe 67 ha ireto jiolahy mody natory ireto. Maro ireo mitaraina fa misy andian-jiolahy eo amin’ny 10 eo ho eo manao andiany manendaka eny amin’iny faritra iny rehefa aminy alina. Niditra an-tsehatra avy hatrany ny polisy ka noraisim-potsiny izy roa lahy ireto. Nahitana antsy lavalela tany amin’izy ireo nandritra ny fisavan’ny polisy. Mirongatra koa ny fanendahana eny Faravohitra tato ho ato. Jiolahy mpanendaka tarihin’i Maintikely izany no mampitondra faisana ireo mpandeha an-tongotra sy mpandeha fiara amin’iny lalana midina avy any Faravohitra mihazo an’Antaninandro iny. Ireo mpianatra sy mpandeha fiara anaty fitohanan’ny fifamovoizana no tena mitondra faisana. Tokony hojeren’ny mpitandro filaminana akaiky iny toerana iny fa manjaka tanteraka ny jiolahy. L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Mpandeha niisa telo avy ao Nosy Be no saron’ny miaramila avy amin’ny ZMPI Ankarana tao amin’ny seranan-tsambo Antsahapano, kaominina Ambanja, afakomaly. Saika hiditra an-tsokosoko tao an-toerana izy telo mirahalahy ireo izao tratra izao ka natolotra ny zandary avy hatrany hanaovana ny famotorana. Marihina fa mbola mitohy ny fepetra mahakasika ny fihibohana any Nosy be, amin’izao fotoana. Mpanendaka miisa telo tamin’ny faritry Cenam 67 Ha sy Nanisana no tra-tehaky ny polisy teo am-panendahana omaly. Samy nahatrarana antsy lava avokoa izy telo mirahalahy ireo. Polisy nanao fanamiana sivily no nahasarona ireo mirahalahy teny 67ha. Marihina fa nandritra ny fisafoana alina no nahatratrana ilay mpanendaka iray teny Nanisana.Lehilahy 68 taona voasambotra noho ny fahaverezan’omby tetsy Ampasika omaly. Nokaramana 2000 ar ny tenany ka nokasaina entina eny Andohatapenaka ilay omby. L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Rugby vehivavy: «Hiezaka handavo ireo andrarezina ny Makis », hoy i Eric Sefo
Mitohy ny fanomanantenan’ny Makis vehivavy eo amin’ny fiatrehana ny «tournoi de repêchage», taranja rugby, hatao any Monaco, ny 19 sy 20 jona izao. «Manitsy ireo lesoka hita tany Tonizia izahay izao”, hoy Randrianarison Eric (Sefo), mpanazatra.Gazety Taratra (*) : Manao ahoana izao ny fahasalaman’i Eric Sefo?Eric Sefo (-) : Taorian’ny fihibohana, roa herinandro izay tsy maintsy natao, efa salama tsara ankehitriny ny tenako, saingy mbola manaraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra, indrindra ny sakafo. Efa mandray ny asa maha mpanazatra ihany koa.* Aiza ho aiza ny fanomanana, taorian’ny “tournoi” natao tany Tonizia?– Nijerena ireo nety sy ny tsy nety iny lalao natrehina tany Tonizia iny, teo amin’ireo mpilalao tsirairay avy aloha, indrindra ny fiarahana. Noho izany, ezahina nahitsy avokoa ireo lesoka rehetra natao tany.* Inona ireo lesoka ireo, nefa ianao tsy nanatrika tany an-toerana?– Marina fa tsy tany ny tenako, saingy nanaraka ireo fizoran’ny lalao rehetra tamin’ny “youtube”. Lesoka hitako ny teo amin’ny fiarovantena sy ny “touche” ary ny “mêlée”. Latsaka kely koa ny tanjaka vokatry ny tsy fahampian’ny mpilalao satria ankoatra ilay iray tsy nandeha, nisy iray ihany koa tsy afaka niakatra kianja.*Mety hisy fiovana ve ireo mpilalaon’ny Makis amin’ity?– Raha 14 ny mpilalao tamin’ny voalohany, nampiana 5 indray izy ireo tamin’ity. Izany hoe, 19 amin’izao ireo manaraka ny fanazarantena farany. Antony nanatevenan’ny Malagasy rugby izany ilay resaka “corona”. Tsy mbola hay ny ho isan’ireo ho any Monaco, satria mbola handalo fitiliana ara-pahasalamana izy ireo ka aorian’izay vao ho fantatra ny handrafitra ny Makis.*Ny fahitan’i Eric Sefo ireo ekipa iray vondrona amin’ny Makis?– Mafimafy foana ny “repêchage” satria tsy vao izao isika no niatrika izany fa efa nisy ny tamin’ny 2016. Amin’ity ny Makis mipetraka ho “outsider” satria “Mondialiste” daholo sady efa nanao “circuit mondial” avokoa ireo mandray anjara amin’ity “repêchage” ity, ka hiezaka ny Makis handavo ireo firenena vaventy ireo.Avoaka amin’io lalao io daholo ny zavatra rehetra nianaran’ireo mpilalao, efa ho herintaona izay ary ireo norantovina tany Japon. Hanao ny faraheriny izany ny Makis amin’ity. Nangonin’i Torcelin L’article Rugby vehivavy: «Hiezaka handavo ireo andrarezina ny Makis », hoy i Eric Sefo a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Fifanintsanana « Can 2022 »: «Afaka mivoaka an’i Frantsa avokoa ireo mpilalao», hoy ny Caf
Afaka ny ahiahin’ny mpitia baolina kitra malagasy rehetra. Nambaran’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf) fa afaka mivoaka an’i Frantsa avokoa ireo mpilalao rehetra miatrika ny fifanintsanana hiadian-toerana amin’ny « Can 2022 ». Nanao fanambarana roa goavana ny kaonfederasiona afrikanina baolina kitra (Caf), ny alatsinainy lasa teo. Anisan’ireny ny filazany fa afaka mivoaka an’i Frantsa sy ireo firenena hafa ny mpilalao rehetra mpila ravinahitra ka hamonjy ny ekipam-pireneny, hiatrika ny fifanintsanana hiadian-toerana ho an’ny “Can 2022”.Araka izany, misokatra ho an’ireo mpilalao ireo ny sisin-tany hahazoan’ireo miditra sy mivoaka ny firenena nihaviany. Ankoatra izay, tsy misy ny fiovana amin’ireo daty efa napetraka sy ny toerana hanatontosana ny fifaninanana, eo amin’ity andro fahatelo sy fahefatra amin’ity lalao fifanintsanana ity.Na eo aza izany, mbola baraingo ny amin’ny lalao mandroso hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, hotanterahina ny 12 novambra ho avy izao. Fihaonana, hatao any Abidjan. Hatreto mantsy, tsy mbola milamina ny fandriampahalemana any an-toerana, noho ny resaka politika. Efa misy ny olona maty vokatr’izay savoritaka any izay.Miandry ny ho valin-tenin’ny Caf ny federasiona malagasy (FMF) sy i Nicolas Dupuis, nangataka ny tsy hanatontosana ny lalao any, noho izay ady an-trano misy any an-toerana izay. “Tsy hilamina mihitsy ny sain’ny mpilalaoko fa hitebiteby lava raha toa ka eken’ny Caf ny hanaovana ny lalao any Abidjan, amin’izao zava-misy izao”, hoy i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar.Nomarihin’ny FMF fa raha tsy manaiky ny fangatahan’ny Malagasy ny Caf, ny amin’ny hanaovana ny lalao mandroso sy miverina eto Madagasikara, tokony hatao any amin’ny firenen-kafa ny lalao mandroso. Tsiahivina fa ny 12 novambra ny fihaonana mandroso eo amin’ny roa tonta ary ny 17 novambra ny miverina, hatao any Toamasina. Tompondaka L’article Kitra – Fifanintsanana « Can 2022 »: «Afaka mivoaka an’i Frantsa avokoa ireo mpilalao», hoy ny Caf a été récupéré chez Newsmada.